Kooxo Hubaysan oo Weerar ku Qaaday Xarunta Barlamaanka Iraan – Radio Daljir
Juunyo 7, 2017 8:29 b 0
Baarlamaanka dalka Iran, ayaa goor dhaw waxaa lagu qaaday weerar hubaysan sida ay soo tabinayaan Warbaahinta dalkaasi.
Ugu yaraan Afar nin oo hubaysan ayaa weeraray dhismaha Baarlamaanka, kadib markii ay soo istaageen Iridda hore ee xarunta Baarlamaanka, kadibna ay rasaas ku fureen illaalada Baarlamaanka, waxayna gudaha u galeen xarunta.
Dableyda ayaa sidoo kale rasaas ooda kaga qaaday Madxafka aas-aasaha dalka Iran Imam Khomeini, sida uu shaaciyay Tv-ga Wararka ee Press.
Waxaa la xaqiijiyay ugu yaraan sideed ruux inay ku dhaawacmeen rasaasta lagu furay xarunta Baarlamaanka, sida Warbaahinta ay u sheegeen Saraakiil. Saraakiil ka tirsan Illaalada xarunta Baarlamaanka, ayaa naftooda ku waayay weerarkaasi.